kuboshwe indoda ngokufa komkayo - Ilanga News
Home Izindaba kuboshwe indoda ngokufa komkayo
kuboshwe indoda ngokufa komkayo
ILALE ibaliwe indoda yaseNewlands, ngaKwaMashu, eThekwini, esolwa ngokushaya ibulale inkosikazi yayo izolo ngeSonto ekuseni iyisola ngoku-thi ifike ekhaya idle amanzi amponjwana.
ILANGA lithole ukuthi uNkk Sheila Vilakazi (35), kusolwa ukuthi ushaywe wabulawa ngumyeni wakhe (esiligo-dlile igama lakhe aze avele enkantolo) besemzini wabo izolo ekuseni, emsola ngokufika ebukhile.
Kuthiwa uNkk Vilakazi ubenamanxeba okushaywa umzimba wonke, nasekhanda kubonakala ukuthi ubeshaywa kanzima ngento elimazayo.Kubikwa ukuthi umufi nomyeni wakhe, bebehlala ngokuxabana, ejwayele ukumshaya, amlimaze kuze kulamule omakhelwane.
Kubikwa ukuthi umsolwa ushaye inkosikazi yakhe maqede wahlaba umkhosi komakhelwane ebatshela ukuthi inkosikazi yakhe ifike emzini wabo ngoMgqibelo ebusuku iphuzile, wabe eseyiyalela ukuba ibuyele lapho beyiphuza khona.
Kuthiwa ubatshele ukuthi uyigcine ngaleso sikhathi eyixosha emzini wabo, akayazi ukuthi iphume yayaphi, uze wayibona ekuseni isifika endlini isilimele.
Kuthiwa uqede ukutshela omakhelwane lokho, wabe esefonela abosizo lokuqala ukuba baphuthume, bazoxilonga inkosikazi yakhe elimele, efike kwakhe ishaywe ngabantu abangaziwa, ilimele kanzima.
Kuthiwa abosizo lokuqala bafike bathola ukuthi inkosikazi isishonile.Umthombo osondelene nalaba, uthe isimo phakathi kwalaba abaganene besingesihle futhi bese kunesikhathi bephila ngokuklwebhana.
“Umsolwa ubengaqali ukushaya inkosikazi yakhe ayilimaze,” kusho umthombo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa abophe owesilisa oneminyaka ewu-37 ubudala ngezinsolo zokushaya, abulale umkakhe.
Uthe kulindeleke ukuba avele namhlanje ngoMsombuluko enkantolo yeMantshi eThekwini ngecala lokubulala abhekene nalo.
Previous articleIsiteleka samanesi eKZN nge-coronavirus
Next articlebakhalela ithambo ngowomndeni owathunjwa